Muna 2020, Dagestan ichave nekugovera mazana matatu emamiriyoni rubles ekudzoreredza kwepasi
Ichi chiyero, maererano neMusoro weRepublic of Dagestan, Vladimir Vasiliev, achaderedza matambudziko nekudiridza kunokonzerwa nekuderera kwemvura.
"Kumaodzanyemba kweRepublic, huwandu hwemhepo inodzikira nekudziya kwemamiriro ekunze, uye izvi zvinotungamira pakuwedzera mamiriro ezvinhu nekuwanikwa kwemvura yekudiridza. Nekudaro, gore rakapera takagovera, sezvisina kumbobvira zvaitika, mazana mashanu emamiriyoni rubles ekutora kwepasi, asi izvi hazvina kukwana, sezvo matambudziko ave achiunganidza munharaunda ino kwemakumi emakore. Mwaka uno takaronga mamwe mazana matatu emamiriyoni rubleti, "akadaro Vladimir Vasiliev pamusangano nevatori venhau.
Kukohwa kukohwo kunoenderera mberi muminda yeDagestan
Zvinofanira kucherechedzwa kuti mari yakaratidzirwa yakarongedzwa kutungamirwa kunyanya mukuvandudza kwemakambani ekurima mafamu. Kunyanya, varimi vanogadzira uye vadzivirire minda yavo yekuregedzera, iyo, kana ikabvumidzwa, ichapihwa mari kubva kubhajeti remudunhu.
Yeuka kuti muna 2019 muDagestan, network yekudzokororazve iri panzvimbo yemahara zviuru gumi nezvitanhatu yakadzoserwa zvakare nekuvakiswazve patsva yezvino tekinoroji, izvo zvakaita kuti ikwanise kuwana yakawedzerwa yekurima yakakosha anopfuura bhirioni imwe rubles.
Tags: Dagestankudiridza kwevhukuwedzera mukugadzirwa kwekurima
Vagadziri vemiriwo vanotaura zvisina kufanira mutengo wekutengesa mitengo
Kuchengetedza uye kusimudzira mhodzi yemazizi panguva yekudyara
Kwayedza mhando uye mahybrids ezvirimwa zvemakwenzi zvakasarudzwa zveRussia
Iyo yepasi rose indasitiri chiitiko "Mbatata Viwanda 2020" ichaitwa!